Guddiga Dastuurka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in dalka Somaliya
Posted by admin on April 26 2011 11:28:41
Guddiga Dastuurka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in dalka Somaliya uu yeelan doono madaxweyne, gudoomiye baarlamaan iyo ku xigeeno ka hor bisha 8aad.
Mogdisho: (Hiranstate.com) – Guddiga dastuurka iyo arimaha federaalka baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay inay waajib tahay in la qabto doorasho lagu soo xulanayo madaxweyne cusub iyo guddoonka baarlamanaka inta aan la gaarin bisha August ee sanadkani aynu ku jirno.
Gudoomiye ku xigeenka ayaa sheegay in ay muhim tahay in xukuamda Farmaajo u hogaansanto go,aanka baarlamaankii iyada codka kalsoonida siiyey ee wax ka dhigay una hogaansamaan oo ay hadii ay shacabka Somaliyeed kasban karaan dhinacooda waxii ay hayaan la yimaadaan ka hor bisha 8aad.
"Waa lagama maarmaan in doorasho la qabto inta aan la gaarin bisha Ogoosto ee sannadkan, waana in doorashada lagu qabto dalka gudihiisa iyadoo la og yahay in caqabado ay jiraan," ayuu yiri guddoomiye ku xigeenka baarlamaanka Somalia xildhibaan C/qaadir Sheekh Ismaaciil oo saxaafadda maanta kula hadlay gudaha xaruntooda ku meel gaarka ah.
guddiga dastuurka ee baarlamaanka shirkoodan jaraa'id ayaa imaanaya iyadoo shalay ay ku dhawaaqeen gudiga doorashada ee uu dhawaan magacaabay guddoomiyaha baarlamaanka Shariif Xasan Sheekh Aadan inay dhameystireen sharciyada doorashada ayna dhawaan bilaabayaan qabashada araajida murashaxiinta tartamaya.
Sida muuqata Somaliya waxaa ka dhalan doonta dowlad rasmi ah oo aan aheyn ku meel gaar. wax yaabaha xukumada Farmaajo u dooneyso in lagu sii jiro ku meel gaarka ayaa waxaa lagu sheegay iney Bankiyo qaas ah dibadaha ka furteen isaga iyo qaar ka tirsan golahiisa wasiirada si aysan marnaba shacabku ula xisaabtamin waxkastana ay ciiriinka ku qeybsadaan halkii hanaanka dowladnimo lagu balaarin lahaa guud ahaan gobolada dalka kedibna loo raadin lahaa walaalaheen Somaliland oo hadii ay ku faraxsan yahiin iney iskood isku taagaane loo fududeeyo hadii ay Somaliweyn qeyb ka noqonayaane dadka degaankaasi fikirkooda xor looga dhigo oo cod laga qaado si dalka iyo dadkuba noloshu u wada gaarto.